NARSON RAFIDIMANANA : « Tsy ho kandidà Filohampirenena izany ny tenako »
Nivoaka tao anatin’ny fahanginana ny minisitra teo aloha, Narson Rafidimanana. Ny talata lasa teo, nisy ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety tao Toamasina. Nandeha mantsy ny feo tao ho ao fa anisany ho kandidà ho Filohampirenena izy. 2 août 2018
Tamin’ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety ny talata io no nilazany ofisialy fa tsy ho anisany kandidà hofidiana ho Filohampirenena ny tenany. Tsy noresahiny ihany koa na hanohana kandida na tsia ity minisitra teo loha ity amin’ny fifidianana ho avy io. Hifantoka betsaka amin’ny fanaovana asa sosialy kosa manomboka eto. Ny fianakaviany izay efa nalaza tamin’ny fanaovana asa sosialy tao Toamasina, dia ny fianakaviana Bezariko izany.
Mijoro ny Dia Araika
Nanangana fikambanana i Narson Rafidimanana. Izy no filoha nasionaly. Fikambanana mitondra ny anarana hoe Dia Araika. Efa misy manerana ny renivohi-paritany io fikambanana io ankehitriny. Ho an’ny ao Toamasina, dia ny ben’ny tanàna teo aloha, Dr Gervais Rakotomanana no filoha. Nambaran’ny filoha nasionaliny, Narson Rafidimanana, fa mampivondrona karazan’olona maro ny fikambanana izay tarihiny. Tsy manavaka finoana, firehana politika, firazanana, fa kosa samy dia araika amin’ny ezaka amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Dia araika amin’ny fifanampina eo amin’ny samy mpiara-belona. Fikambanana tsy manao politika ny Dia Araika raha ny voasoratra ao anatin’ny fitsipika mifehy ny fikambanana.
Tetikasa maro no vinavinain’ny fikambanana Dia Araika atao ao Toamasina, raha ny nambaran’ny filoha nasionaliny hatrany.